Bit By Bit - Isingeniso - 1.5 Uhlaka ncwadi
Le ncwadi ihlelwe bezungeza ukuqhubeka ngokusebenzisa ezine ebanzi ucwaningo lusondela: kokubona ukuziphatha, ukubuza imibuzo, egijima kwenziwa ucwaningo, kanye nokuvulwa kwamathuba omsebenzi ukubambisana mass. Lezi zindlela abane zonke esetshenziswa abasohlotsheni oluthile lwenkonzo eminyakeni engu-50 edlule, futhi Ngiyaqiniseka ukuthi bonke lisetshenziswe Ifomu eminyakeni engaba ngu-50 kusukela manje. Ngiye anikezelwe isahluko esisodwa kuya ndlela ngasinye. Abaningi izahluko section enikelwe ehlaziya eminye, i-appendix lobuchwepheshe noma zomlando, kanye nemisebenzi engasetshenziswa ekilasini noma self-cwaningo. Ngenxa yalezi zici, Ngiya ukugcina umbhalo main kulula ngangokunokwenzeka; ungabheka lezi kwezinye izingxenye izahluko uma ungathanda imininingwane engaphezulu nezikhombo singene izincwadi.
Esahlukweni 2 (ukuziphatha Ukuqaphela), ngizokwenza bachaza lokho futhi kanjani abacwaningi bangafunda ngokubuka ukuziphatha kwabantu. Ikakhulu, ngizogxila ezintweni digital idatha trace kanye nedatha zokuphatha lapho umcwaningi babengenalo indima kudalwa idatha. Mina ngizoba uchaze izici ezivamile yalolu hlobo data, mina ngizoba ukuchaza ezinye zezindlela ongazizama ucwaningo engasetshenziswa ukuze ufunde ngempumelelo endleleni abaphatha ngayo waphawula.
Esahlukweni 3 (Ukubuza imibuzo), mina uzoqala ngokubonisa ukuthi abacwaningi Ungafunda ngokufaka ezihambayo ngal kokubona ukuziphatha bese uqala ukuhlanganyela nabantu. Ikakhulu, mina nguye unelungelo lokunquma ukuthi kukhona inzuzo enkulu ngokwenza ucwaningo inhlolovo, ngisho kuleli zwe ugcwele ekhona kakade idatha digital. I sizohlola bendabuko Imininingwane uhlaka iphutha inhlolovo futhi ulisebenzise ukuze ahlele ezenzekayo yobudala digital kwenza ucwaningo inhlolovo. Ikakhulu, Ngizobonisa indlela yobudala digital kungaholela ushintsho olukhulu izibonelo zalokho futhi kokuxoxa. Ekugcineni, mina ngizobe chaza amasu ezimbili ngoba esihlanganisa data inhlolovo nge idatha trace digital. Naphezu kweqiniso nombono wokungabi nathemba ukuthi abanye abacwaningi inhlolovo njengamanje uzizwe, ngilindele ukuthi yobudala digital kuyoba inkathi yokuchuma ucwaningo inhlolovo.
Esahlukweni 4 (Running nemaresiphi), mina uzoqala ngokubonisa ukuthi abacwaningi bangafunda lapho ukudlulela ngale kokubona ukuziphatha abuye abute imibuto inhlolovo. Ikakhulu, Ngizobonisa randomized ezilawulwa indlela nemaresiphi-lapho umcwaningi ungenela emhlabeni othize kakhulu ngendlela unike amandla abacwaningi ukuze ufunde kabanzi mayelana nobudlelwano esiyimbangela. Ngizokwenza qhathanisa izinhlobo nemaresiphi ukuthi singenza esikhathini esidlule letinhlobo ukuthi singakwazi ukwenza manje. Ngemva kwalokho background, ngizobuya ukuchaza ukudela okuthile okuhilelekile emaqhingeni ezimbili eziyinhloko zokwenza ucwaningo digital. Ekugcineni, mina ngizobe siyophetha ngenkulumo ezinye izeluleko design mayelana nendlela ungathatha ngokunenzuzo kulamandla ucwaningo digital bese uchaze ezinye nomthwalo lawo mandla.
Esahlukweni 5 (Ukudala ukubambisana mass), Ngizobonisa indlela abacwaningi kungadala mass collaborations-ezifana Ukuthumela kanye nesakhamuzi nesayensi-ukuze wenze ucwaningo social. By echaza yimpumelelo mass ukusebenzisana amaphrojekthi kanye ngokunikeza izimiso ezimbalwa ekuhleleni key, ngithemba ukukukhuthaza ngezinto ezimbili: okokuqala, ukuthi ukubambisana mass usetshenziswe ucwaningo social, futhi okwesibili, ukuthi abacwaningi abasebenzisa mass ngokubambisana uzokwazi ukuxazulula izinkinga ukuthi ubeseke kwakubonakala kungenakwenzeka. Nakuba ngokuvamile ngokubambisana mass igqugquzela indlela ukusindisa imali, kuba okungaphezu kwalokho. ngokubambisana Mass ayivele kusinika ithuba lokwenzani eshibhile ucwaningo; liyasisiza ukuba wenze ucwaningo kangcono.
Esahlukweni 6 (Ethics), mina nguye unelungelo lokunquma ukuthi abacwaningi amandla esikhula ngokushesha phezu ababambiqhaza, nokuthi lezi amakhono ayashintsha ngokushesha ukwedlula izinkambiso zethu, imithetho, kanye nemithetho. Lo mbuso inhlanganisela-anda, ukuntuleka isivumelwano mayelana nendlela lawo mandla kufanele asetshenziselwe-amaqabunga abanezinhloso abacwaningi esimweni esinzima. Ukuze kuxazululwe le nkinga, mina nguye unelungelo lokunquma ukuthi abacwaningi kufanele sibe nesimo izimiso ezisekelwe approach. Okungukuthi, abacwaningi kufanele ahlaziye ucwaningo lwabo ngokusebenzisa imithetho-okuyinto ekhona ngizothatha njengombana sinikelwa-nangenduduzo nezimiso letivamile zokuziphatha. uzoba mina phakamisa izimiso ezine esungulwe nezinhlaka ezimbili eziphathelene nezimiso zokuziphatha ezingasiza liqondise izinqumo zakho. Ekugcineni, mina ngizobe kuchaza sihlaziye ezinye izinselele eziphathelene nezimiso zokuziphatha Ngilindele ngeke bhekana abacwaningi esikhathini esizayo, futhi ngizobuya unikele awusizo ngokusebenza endaweni nokuziphatha nokwethuka.
Ekugcineni, ngo isahluko 7 (The esizayo), ngizokwenza afingqe izihloko ezintathu ukuthi ziyabuya yonkana izahluko nokuthi kuyoba kubaluleke kakhulukati esizayo.
ucwaningo Social in the age digital kuzohlanganisa ngalokho esikwenzile esikhathini esidlule ne amakhono ehlukene kakhulu ngekusasa. Ngakho, ucwaningo social uzobe khuphela kokubili ososayensi bezenhlalo nososayensi idatha. Iqembu ngalinye unokuthile esivivaneni, begodu isiqhema ngasinye unokuthile ukuze ufunde.